डरपोक सभामुखले अमर्यादित शब्द डिलेट गर्न सकेनन् : देउवा – Everest Times News
डरपोक सभामुखले अमर्यादित शब्द डिलेट गर्न सकेनन् : देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय मर्यादा विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आएको अभिव्यक्तिलाई सभामुखले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानको सन्दर्भमा आज राजधानीमा सम्बोधन गर्दै देउवाले हिजो संसदमा भएको घटनाको प्रसंग उप्काए ।
‘हिजो संसदमा देखिहाल्नु भो । गैरसंसदीय शब्द डिलिट गर्नु भनेको डरपोक काँतर सभामुखले सकेनन्,’ आक्रोशित मुद्रामा देउवाले भने, ‘इतिहासमै काँतर सभामुख रहेछन् ।’
संसदमा ‘मेरो सरकार’, ‘हर मेजेस्ट्री’ जस्ता शब्दहरु भित्रिन थालेको विषयलाई उनले कडा रुपमा आलोचना गरे । ‘कम्युनिस्टले बिस्तारै जे पायो त्यही बोल्न थालिसके,’ देउवाले भने, ‘सदन त विपक्षीको भनिन्थ्यो। तर, सभामुखले गरिमा राख्न सकेनन् ।’
उनले हरेक क्षेत्रमा कम्युनिस्ट सरकारले हस्ताक्षेप गर्न थालेको दाबी गरे । त्यसविरुद्ध २००७ साल, पञ्चायत र राजाविरुद्ध लडे झै लड्न तयार भएको दाबी गरे। ‘कुर्सी भाच्ने, रेलिङ भाच्ने पार्टी होइन हाम्रो,’ उनले कांग्रेसको जागरण अभियान थाल्नुको कारण दिँदै भने, ‘अब कम्युनिस्टबाट मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आउनसक्छ। जागरण यसैका लागि हो ।’
नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको जागरण कार्यक्रममा नेताहरुले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेक्रममा नेपाली कांग्रसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनतालाई अधिकार दिन काग्रेसले संघर्ष गर्दै आएको दाबी गरेका थिए ।
‘कम्युनिस्टहरु अरुले गरेका काम पनि आफूले गरेको भन्छन् । कांग्रेसले आफूले गरेको काम भन्दै नभनी थाह पाइहाल्छन् नि भनेर बस्छन्,’ सिंहले भने, ‘रुन पनि पाउँदैन भनेर देउवाले भन्दा मान्छेहरु नहुने कुरा भन्थे। अब त्यस्तै हुन लागेन? पत्रकार पक्रेन?’
उनले संसदमा विपक्षीलाई होच्याउनु भनेको जनतालाई होच्याउनु रहेको तर्क गरे । ‘संसदमै विपक्षीलाई होच्याउने? यो त जनतालाई होच्याएको हो नि,’ उनले भने, ‘अब यसको सशक्त विरोधका लागि कांग्रेस सशक्त हुनुपर्छ। यसैका लागि जागरण अभियान हो ।’
विधिसम्मत चल्ने पार्टी भएकाले कम्युनिस्टलाई चेत गर्न तेरो मेरो भन्न छाड्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै आफ्नै पार्टीको नाम समेत स्थिर राख्न नसक्नेले देश स्थिर बनाउनै नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
नयाँ शक्ति र समाजवादीबीच एकीकरण : यस्तो छ नौ बुँदे सहमति